Banijya News | चीनबाट आइपुग्यो कोरोनाविरुद्धको आठ लाख खोप, ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई लगाइने - Banijya News चीनबाट आइपुग्यो कोरोनाविरुद्धको आठ लाख खोप, ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई लगाइने - Banijya News
चीनबाट खरीद गरेर ल्याईने भनेको कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’को काठमाडौं आइपुगेको छ । शुक्रवार बिहान नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजबाट आठ लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो ।
चीनको बेइजिङबाट आठ लाख डोज खोप ल्याएको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । ‘आज बिहान वाइडबडीले पहिलो चरणमा आठ लाख डोज खोप ल्याएको छ’–गौतमले भने । नेपालले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट ४० लाख डोज खोप खरीद गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो खेपमा निगमको जहाजले आठ लाख डोज ल्याएको हो ।
त्यस्तै, फेरि दोस्रो खेपका लागि ३१ असारमा निगमको जहाज चीन जाने कार्यतालिका रहेको छ । यससँगै तेस्रो खेपमा खोप ल्याउन निगमको जहाज ७ साउनमा चीन जाने भएको छ । अर्को साताबाट खोप लगाउने तयारी रहेको खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले जानकारी दिए ।
आज ल्याएको खोप ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि चीनले अनुदानमा भेरोसेल खोप दिएको थियो । जुन खोप हाल लगाइँदै छ ।